Xhumanisa Ukwakha nesakhiwo seBrand ngeSemalt
Kuyini Isixhumanisi Sokwakha?
Ukubaluleka kwesakhiwo Sokuxhumanisa
Ungawasebenzisa Kanjani Amasu Wokwakha Brand ukusiza Usizo Lokwakha Isixhumanisi
Isidingo sokwenza izixhumanisi ezisezingeni eliphezulu akukaze kubaluleke kakhulu ekusungulweni kwewebhusayithi yakho njengesiphathimandla ku-niche yakho. Ukwakha izixhumanisi nakanjani kuba nzima ngokwengeziwe njengoba iGoogle iqhubeka nokuvuselela imithetho yayo, futhi idinga ukuhlanganiswa kwezindlela ezahlukahlukene, imibono, kanye nezindlela zokufeza imiphumela emihle.
Bheka kuyo yonke i-intanethi futhi uzobona ukuthi imikhiqizo eqinile ibusa kuwebhu. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi uqale ubone ukwakhiwa kwesixhumanisi njengethuluzi elibalulekile lokwenza uphawu, kepha ngasikhathi sinye ukubona uphawu lomkhiqizo njengendlela yokusiza ukwakha izixhumanisi eziseqophelweni eliphezulu. Ukuqaphela lokhu sekwenze abantu abaningi bathi ukwakhiwa kwesixhumanisi kufana nokwakhiwa komkhiqizo. ESemalt, siyazi ukuthi iqiniso yilezi zimiso ezimbili ezisebenzayo ukukunikeza impumelelo yebhizinisi lilonke. ¬
Ukwakhiwa kwesixhumanisi inqubo yokuthola noma yokuthola izixhumanisi kusuka kwamanye amawebhusayithi kwi-inthanethi esizeni sakho. I-hyperlink (ebizwa ngokuthi isixhumanisi) nje yindlela yokuhamba phakathi kwamakhasi ku-inthanethi.
Izinjini zokusesha, njengeGoogle, zisebenzisa izixhumanisi zokukhamba kuwebhu - zikhasa izixhumanisi eziphakathi kwamakhasi ahlukile kwiwebhusayithi yakho, futhi futhi zikhwebe noma yiziphi izixhumanisi ezikhona phakathi kwamawebhusayithi athile.
1. Kuyasiza ngenjini yokusesha: Kunezindlela ezimbili eziyisisekelo iGoogle ezisebenzisa ngazo izixhumanisi. Esokuqala ukuthola amakhasi amasha kuwebhu bese elesibili ukuwasiza ukuthi ahlele amakhasi ngokufanele emiphumeleni yawo yokusesha.
Noma nini lapho izinjini zokucinga zikhasa amakhasi e-web, zingakhipha lokho okuqukethwe amakhasi futhi zikufake ezinkombeni zawo. Le ndlela bangabona ukuthi ikhasi lihlangabezana nezidingo zabo zekhwalithi futhi kufanelekile yini ukuba lifakwe kahle ngamagama asemqoka afanele.
Okuqukethwe yikhasi lakho akusona ukuphela kokucacayo okunika ibanga ku-Google TOP 100 - IGoogle ibheka nenombolo yezixhumanisi eziza ekhasini elicatshangelwe kwamanye amawebhusayithi athile nekhwalithi yalezo zingosi zangaphandle. Lokhu kumane kusho ukuthi unethuba eliphakeme kakhulu lokumiswa kangcono emiphumeleni yosesho njengoba amawebhusayithi esezingeni eliphakeme axhumanisa neyakho.
Abasebenzisi abaningi benjini yokusesha basebenzise kabi lo mqondo futhi bawusebenzisa ngokweqile lo mqondo; Ngakho-ke, iGoogle iqale ukubulala izibuyekezo zemithetho yayo ukunqanda le mikhuba. I-Google isike yamisa namawebhusayithi athile athuthukisile amakhasi abo e-webin nezinhlawulo ze-Google ezethusayo. Akukaze kube nje iwebhusayithi iyalulama ezinhlawulweni ezinjalo. Ngakho-ke, kungakuhle ukuthi abanikazi bewebhu basebenzise umqondo wokwakha isixhumanisi ngokulinganisela.
Ngendlela efanayo ukuthi izixhumanisi ezisezingeni eliphakeme zingazuza iwebhusayithi yakho ngokunikeza izikhundla ezinhle ku-Google TOP, izixhumanisi ezisezingeni eliphansi nazo zingakulimaza ekubekeni kwakho ku-TOP. Amanye amawebhusayithi ancintisanayo angafuna ukusebenzisa amasu we-SEO hat emnyama ukuze akwehlisele phansi ukuze akhuphuke njengomphumela. Ngakho-ke, uyokwenza kahle ngokuhlale uqaphela ukuthi ungawususi izixhumanisi ezinjalo. ESemalt , sihlala siqaphe amakhasimende ethu.
2. Kuyasiza ukukhulisa ithrafikhi yokudlulisela: Izixhumanisi nakanjani zikusiza ekutholeni isikhundla sakho osifunayo ku-Google TOP kodwa uyazi ukuthi bangakwazi nokushayela ithrafikhi kuwebhusayithi yakho? Isixhumanisi sekhwalithi ephezulu kusuka kuwebhusayithi evame ukuvakashelwa singahambisa ithrafikhi yabo kusayithi lakho. Futhi uma iwebhusayithi yabo ingeyodwa ehambisana nalokho okulethayo, kunethuba eliphezulu lokuthi ithrafikhi ekhiqizwe izixhumanisi zabo izokhokha amakhasimende.
Ngakho-ke, ukwakhiwa kokuxhumeka namanye amasayithi akukhona nje inani lesibalo sezithuthi abazitholayo kodwa mayelana nokuhambelana kwethrafikhi yakho kulokho okufanele unikele kuwebhusayithi yakho.
3. Kuyasiza ukwakha ubudlelwane: Izikhathi eziningi, ukuxhumeka kwesakhiwo kuzobandakanya ukufinyelela kumabhulogi afanele kanye namasayithi ku-niche yakho. Esikhathini esiningi, ufinyelela kulaba bantu abanethonya ukusiza ukukhuthaza okuqukethwe kwakho okusha futhi isizathu esikhulu ukuthola isixhumanisi kubo i-Google esingasithatha njengesici ukukuklelisa kahle.
Okwamanje kusiza izinzuzo ze-SEO, ukufinyelela kulabo abanethonya embonini yakho kungakusiza ekwakheni ubudlelwano besikhathi eside nabo okuzophakamisa nezinga lakho lokukholeka emehlweni abathengi bomkhakha wakho.
4. Kuyasiza ekwakhiweni komkhiqizo: Lapho ukwakhiwa kwesixhumanisi kwenziwa kahle, kungakusiza ukuthi wenze igunya lomkhakha ngokwenza umkhiqizo wakho uvele njengowodwa.
Ukudalwa kokuqukethwe kungenye yezindlela eziningi zokuxhumanisa ezingakusiza ukuthi ubonise amakhasimende akho okungenzeka abe uchwepheshe wakho, ongakusiza ekwakheni umkhiqizo oqinile.
Masithi udala ucezu lokuqukethwe oluhle ngokusebenzisa idatha efanelekile eqoqwe embonini yakho futhi uyishicilela online, amathuba ukuthi ukuthandwa kwakho embonini yakho kuzokhula. Ngemuva kwalokho lapho ufinyelela abanye abantu embonini yakho ukuthola izixhumanisi, ukhombisa ubuchwepheshe bakho futhi ngasikhathi sinye usakaza okuqukethwe kwakho kubabukeli abanzi.
Ngendlela efanayo naleyo exhumanisa ukwakhiwa engasiza ekwakhiweni komkhiqizo, kukhona namasu ezakhiwo zemikhiqizo engasetshenziswa ukusiza ukwakha izixhumanisi ezisebenzayo. Ake sibheke ezinye izindlela ezisetshenziswa ngabachwepheshe be-brand bese sibona ukuthi zingasetshenziswa kanjani ekwakheni izixhumanisi.
1. Imvelaphi, Ikhwalithi nokuvumelana kokuqukethwe nokuxhumana : Ikhwalithi yokuqukethwe kwakho nokuxhumana kuyohlala kutshela abathengi bakho abazoba ikhwalithi yangempela yemikhiqizo noma izinsizakalo okufanele uzinikeze. Njalo qiniseka ukuthi uhlala okusemandleni akho uma uqeda ukuphuma kokuqukethwe noma unikela ezingxoxweni kwamanye amawebhusayithi noma amabhulogi. Lapho uletha okuqukethwe okungaguquki, okwangempela kanye nekhwalithi, ukuqina kwemakethe yakho kuba namandla. Futhi lapho kuba negunya ngokwengeziwe, izixhumanisi ezi-organic oqala ukuzikhiqiza.
2. Ukubekwa Kumkhiqizo: Ama- Brand Strategist awalokothi akushaye indiva ukuqondisa izithameli ezifanele. Ngendlela efanayo, ikhwalithi yomyalezo womkhiqizo wakho ibaluleke ngokulinganayo njengokuqondisa amawebhusayithi kanye nezincwadi ezilungile.
Noma nini lapho usekhankasweni wokutholwa kokuxhumanisa, zibuze njalo ukuthi ngabe lelocebo lizohamba yini nomkhiqizo wakho endaweni oyifunayo ukuze ubambe emakethe eqondiwe.
Isichasiso senani lomkhiqizo wakho oyingqayizivele kufanele ngaso sonke isikhathi sibe nendawo kuyo yonke okuqukethwe kwakho nokuxhumana okuku-inthanethi. Kufanele usebenzise izixhumanisi njengamabhuloho abantu abanentshisekelo ngalokho umkhiqizo wakho ongakunikeza. Ngakho-ke, thola izixhumanisi kusuka kumawebhusayithi anezithameli zakho futhi zenze kube lula ngawo ukukuthola.
Isihluthulelo sokuthola izixhumanisi ezithuthukisa ukubonwa komkhiqizo nokusebenziseka kweinjini zokucinga iwukuba nemilayezo yokubeka uphawu esezingeni elifanele kumawebhusayithi afanele egunya.
3. Ukwakha ubudlelwano: Ukumema ontanga bezimboni ukuthi banikele ngokuqukethwe kuwebhusayithi yakho futhi ubenzele zona futhi kuyindlela enamandla kakhulu yokubeka uphawu engakusiza ekwakheni izixhumanisi. Ukuhlangana kwakho neminye imikhiqizo ethembekile embonini yakho kuzokusiza ubukeke uthembekile futhi uthembekile.
Indlela enhle yokubonisa izinhlangano zakho kungokuqukethwe okulethela izilaleli zakho. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi ucele ontanga yakho ukuthi babhale izivakashi kumablogi akho, ngokwesibonelo.
Ungacela futhi ukuphinda ushicilele okunye okuqukethwe kwabo okudala (okuhlobene nezithameli zakho) esizeni sakho - futhi, unganika ontanga yakho ilungelo elifanayo lokushicilela kabusha okuqukethwe kwakho okudala.
Enye inzuzo yaleli qhinga lokuwina uwena ukuthi kuqinisa ukuthembana okuphelele nokwaziwa ngababhali bamawebhusayithi. Enye inzuzo ongayicabangela ukuthi njengoba okuqukethwe kuzothuthukiswa kumanethiwekhi womabili amaqembu, bobabili bazothola izixhumanisi eziphilayo kanye namakhasimende / abafundi abasha. Umkhiqizo wakho uba namandla emehlweni abavakashi bakho abasha lapho bebona ukusebenzisana phakathi kwakho neminye imikhiqizo ethembekile.
4. Ukuxoxa izindaba: Lona ngomqondo onamandla kakhulu ekubekeni uphawu. Zonke izinhlobo ezinkulu zinezindaba ezinhle ezinamathele kumikhiqizo yazo futhi abantu basebenza kanzima ukuxoxa izindaba.
Uma unendaba enhle engaguquki, kuzokwenza kube lula ngawe ukuthi uhlanganise izixhumanisi namagama asemqoka kwimiyalezo yakho futhi lokhu kuzokusiza ukuthi ufinyelele ezikhundleni ozihlose ku-Google TOP.
5. Ukwakha amanxusa omkhiqizo: Abantu bazimisele kakhulu ukwethemba abanye abantu kunohlobo uqobo lwalo. Funda ukwenza uphawu lomkhiqizo wakho libe ngumuntu ngokunikeza ubuso balo.
Thuthukisa abantu abazoba ngabathwali befulegi lomkhiqizo wakho kuyo yonke i-intanethi. Bazokusiza ukuxoxa udaba lwakho, bakhe ukuqwashisa futhi baqinise umbono wakho womkhiqizo ngendlela ebonakala ingenamsebenzi. Lezi zinxusa zomkhiqizo zizokwakha izixhumanisi ezizokhiqiza ithrafikhi ethe xaxa kusayithi lakho futhi zibuye zithuthukise amazinga akho kuGoogle TOP.
Ukwakha izixhumanisi kungakusiza ukuthi wakhe umkhiqizo onamandla futhi ukwakhiwa komkhiqizo nakho kungakusiza ekwakheni izixhumanisi ezisezingeni eliphezulu. Ukwakhiwa kwezixhumanisi nokwakhiwa komkhiqizo kuhlangene ngokuqinile ukuthi imiqondo yabo ihlala igcwele. Awungeke wakhe umkhiqizo othembekile ku-inthanethi ngaphandle kwesakhiwo sesixhumanisi nokuphikisana nalokho. I-Semalt inamathuluzi amahle kakhulu embonini ukukusiza ngazo zombili izixhumanisi zokwakha nokwakhiwa komkhiqizo kwimpumelelo yebhizinisi lakho.